औद्योगिक वातावरण अव सुध्रिन्छ-मातृकाप्रसाद यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूति मन्त्री
Posted: 2018-05-02 11:58:33
मातृकाप्रसाद यादब अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छन् । तेस्रो पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका यादव फरक काम गर्ने शैलीका कारण सधैं चर्चामा हुन्छन् । एलडिओलाई शौचालयमा थुनेका यादबले मन्त्री पद समेत गुमाए । उनीसँग मुलुकको उद्योग व्यवसायका विभिन्न पक्ष्गमा अधारितरही गरिएको कुराकानी ।
उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
उद्योग ब्यवसायमा सरकारी र निजी क्षेत्र छन् । मूलत नेपालमा दुईवटै क्षेत्र असफल भएको छ । सरकारले चलाएका उद्योगधन्दा पनि फेल भयो । निजी क्षेत्रले त्यसलाई लियो र त्यो पनि फेल भयो । यही विचित्रको अवस्था हामीसामू छ । सरकारले जनताको सम्पत्ति बेचेर खायो, उसले पनि अब बेचेर खाँदैछ। अहिले हामी के छलफलमा छौँ भने राष्ट्रिय उद्योगधन्दा निजी क्षेत्रले चलाउनुपर्छ । यसका लागि तीनवटा मोडल छ। नेपालमा विभिन्न खनिजजन्य उद्योग छन्। फलाम खानी छ, अन्य साधन र स्रोत छन्। त्यसलाई सरकारले आफैं चलाउनु पर्छ । संभव भएसम्म पुराना उद्योग सरकार आफैंले चलाउने। अर्को साझेदारी मोडल भयो । र तेस्रो भनेको निजीकरण हो ।
हाम्रो विगत हेर्दा सबै कुरा बेचेपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता विकास भयो। दुनियाँमा धेरै यस्ता अभ्यास भए, जहाँ पूर्णरुपमा निजीकरण गरिएका छैनन् । तर कमिसनको लोभमा निजीकरण गरियो । विकास गर्न त निगरानी गर्नुपर्छ । विकास त त्यत्तिकै हुँदैन नि । निजी क्षेत्रका कम्पनीले काम गर्ने मेनेजर राखेको हुन्छ, उसलाई लक्ष्य दिइएको हुन्छ र उसले त्यसअनुसार काम गर्छ । तर, सरकारीमा भने कर्मचारी राजा बन्छ ।
कर्मचारीहरुको सहयोग कसतो देखिन्छ ?
यहाँ कर्मचारी राजा हुने गर्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी भुल्छन् । सेवा दिने भन्दा स्वार्थपूर्तीमा ध्यान धेरै भयो । म पनि मन्त्री हो नि । म आफैँलाई भनिरहेको छु । अहिले हाम्रो सरकारको जुन टिम छ, त्यसको उद्देश्य सेवा दिने छ । हामी भएकै चिजबाट सेवा दिन्छौँ । तपाईँ हेर्नुस् न प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वृद्धि कहाँ पुग्यो, लोडसेडिङ हट्यो, यही संरचनाले काम गर्यो नि । कुलमानजी र जनार्दनजीले काम गरेको देखियो नि । राम्रो गरेको उदाहरण पनि छन् । हाम्रो प्रधानमन्त्री र सिएम (चेयरम्यान प्रचण्ड) दुवैले सेवा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यसले हामीलाई पनि अझै सजिलो बनाएको छ ।
अव त्यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?
हामी अन्तरनिकाय समन्वय गरेर अघि बढ्न खोज्दै छौँ । गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयलगायतसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौँ। विगतमा हाम्रो टिम वर्क हुँदैनथ्यो। अहिले हामी त्यसलाई अघि बढाउने पक्षमा छौँ। सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्दा राम्रै हुन्छ नि । हाम्रो त सोध्यो भने लाज मान्ने कल्चर छ। हामी सामन्ती संस्कारमा हुर्कियौँ। सामन्तको विशेषता भनेको उनीहरु सर्वज्ञाता हुन्छन् । तर वास्तविकता त फरक हुन्छ नि । हामी सबैको बुद्धिलाई केन्द्रित गरेर अघि बढ्न खोजेका छौँ । प्रधानमन्त्री र हाम्रो सिएमले जस पाउनुपर्छ। उहाँहरुले जस पाएपछि हामी त त्यसै जस पाइहाल्छौँ। एउटा मातृकाले मात्रै जस पाउने कुरा होइन ।
धरासायी उद्योग लाई के गर्नुहुन्छ?
तिनीहरुको अध्ययन भइरहेको छ । संभव भएका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँछौँ । एउटा त यही महिनामा सञ्चालनमा आउँछ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्नुहुन्छ ?
मैले त आव्हान गर्ने हो। निजी क्षेत्रको उच्च सम्मान हुन्छ । जहाँ जहाँ समस्या छ त्यो हल हुन्छ। मेरो एउटै शर्त हो, गडबड गर्न पाइँदैन । निजी क्षेत्रसँग जानुको अर्थ निजी क्षेत्रमा डुब्नु होइन । निजी क्षेत्रभित्रको कमी कमजोरीमा सरकार बग्ने होइन। सरकारीतर्फ जानुको अर्थ जेजे कमजोरी सरकारी क्षेत्रमा छन् तिनीहरुमा बग्नु होइन। हामी दुवैतर्फ करेक्सन गर्छौँ । उहाँहरु फाइल घुमाउँदा घुमाउँदा हैरान हुनुहुन्छ। मैले भनेको छु पाँच पैसा घुस नदिनुस्। घुस दियो भने काम हुँदैन। आखिर त्यो फाइल त म कहाँ आउँछ। थाहा त हुन्छ । त्यसैले फाइल कहाँ रोकिएको छ मलाई सूचना दिनुस् भनेको छु । कतिपय कानुनमा अप्ठ्यारा छन् त्यसलाई सहज बनाउन पहल गर्छु ।
सरकारको प्राथमिकता कसता उद्योगमा हुन्छ ?
सरकारको प्राथमिकता उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा धेरै छ । व्यापारभन्दा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा हामी राख्छौँ। व्यापार पनि चाहिन्छ । तर मगाएर खाने कि आफू उत्पादन गर्ने। हामीले यसमा हेर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको अवस्था कस्तो छ भने मगाएर खाइरहने तर आफ्नो उत्पादनलाई खतम गरिदिने । हाम्रो उद्योगीहरु पनि खतम छन् । उद्योगीहरु पनि साइन बोर्ड उद्योगको लगाएका छन् तर भित्र व्यापार गरेका छन् ।
हामी नेपाली हौँ । हाम्रो देशका लागि के भूमिका हुन्छ सोच्दिनुस् भनेर हातै जोडेर भनेको छु । यो पनि एक किसिमको क्रान्ति हो। उहाँहरु पनि यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन हो। आमूल परिवर्तन गर्नेतर्फ हामी पनि लाग्नुपर्छ। परिवर्तन पनि विस्तारै हुन्छ। कर छल्ने प्रवृत्ति हुनु हुँदैन। सरकारले पनि घुस लिनु हुँदैन ।
उद्योग दर्ता गर्दा नौ महिना समय लाग्ने देखिएको छ । घुस नमागेपनि यो पनि अवरोध नै हो। कसरी हटाउनुहुन्छ ?
अब त्यो हुँदैन । अब पुरै कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमा लैजान्छु । यसले कम जनशक्तिमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा पारदर्शिता ल्याउँछ । काममा पनि सरलता ल्याउँछ । म्यानुअल्ली काम गर्दा पारदर्शिता हुँदैन। कतिवटा उद्योग चलेका छन् तथ्यांक छैन। विभिन्न स्वार्थ समूहले चलाइरहेका छन् । एउटा फाइल मन्त्री गएपछि मन्त्रीसँगै हरायो, पछि फेरि खोज्न लगाएर ल्याएँ। अनलाइनमा गएपछि, डेटाबेसमा तथ्यांक भएपछि धेरै कुरा पारदर्शी हुन्छन् । अनलाइनबाट उजुरी गर्ने र हाम्रो कुरा पनि त्यहाँ राख्ने प्रणाली बनिरहेको छ । त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउछौँ । त्यहाँ प्राप्त भएका सकारात्मक सुझाव ग्रहण गर्छौँ ।
स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि तपाईंको पहल कस्तो हुन्छ ?
स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको लगानी विस्तारमा सहयोग पुर्यानउने छौँ । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । हाम्रो झुकाव स्वाभाविक रुपमा स्वदेशी लगानीकर्ताप्रति हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताबाट पार लाग्ने स्थिती अहिले छैन । स्वदेशी लगानीकर्ताको रकम स्वदेशमा छरछैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। त्यसले गर्दा हामी दुईवटै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छौँ । हामी स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिन्छौँ तर पर्खेर बस्ने होइन ।
अहिले चिनीको विषय आएको छ। स्वदेशी खाने कि विदेशी। स्वदेशी खाँदा महँगो पर्ने भयो। विदेशी खाँदा सस्तो पर्ने भयो। अहिले अब चिनीमा कर बढाउँदै छौँ। बजार भाउ नबढ्ने गरी कर बढाउन लागेका छौँ। त्यसले हाम्रो उद्योगको संरक्षण हुन्छ र किसानको पनि संरक्षण पाएका छन् ।
नेपाल र भारतबीच व्यापारिक अवरोधका विषयमा धेरै कुराहरु बाहिर आएका छन् । तपाइँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ’सगरमाथा से सागर तक’ भन्नु भएको छ । त्यो कुरा हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो । भन्ने बित्तिकै जहाज त चल्दैन । पैसा चाहियो, मान्छे चाहियो अनि जहाज पनि चाहियो। खाली झण्डा लगाइदिएर त जहाज चल्नेवाला छैन । त्यहाँ नेपाली पनि चाहिन्छ। अहिले केही दिनका लागि सापटी लिएर चलाउँला । हामी सापटी पनि धेरै कुराको लिइरहेका छौँ। सापटी फिर्ता गर्दिन्छौँ र हाम्रो चलाउछौँ भन्ने अवस्था आउनुपर्छ ।
विशाखापट्टनमको काम अगाडि बढिरहेको छ । विशाखापट्टनम पाइसकेपछि कलकत्तामा केही क्षेत्रको मनमौजी अन्त्य भएको छ। प्रतिस्पर्धा बढ्ने अवस्था देखिन लागेको छ । विशाखापट्टनमा धेरै सुविधा दिने कि कलकत्तामा भन्ने हुन थालेको छ । यसले केही सुविधा त देला। बंगलादेशसँग पनि व्यापारिक सहजताका लागि कुरा भइरहेको छ। बंगलादेशसम्म सुरुङमार्गको कुरा उठाएको थिएँ । त्यसमा पनि भारत सकारात्मक छ ।
तपाईं माथि व्यापारीको दबाबमा अनुगमन गर्ने कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लागेको थियो नि !
म आफैँ भन्दिन्छु यो कुरा । म कम बोलेको छु तर उहाँ त नेता जस्तो हुनुभयो। मिडियामा बोलेको छ। गणतन्त्रमा कर्मचारी धेरै बोल्न पाउने व्यवस्था होला। सबै कानुन त मलाई थाहा छैन। निजी स्वार्थमा काम गरेकाले सरुवा गरिएको हो। एउटा पनि मुद्दा चलाउन सक्नु भएन। मुद्दा नचलाऊ भनेको भए म दोषी हुन्थेँ। मैले मुद्दा चलाऊ भनेँ उहाँले चलाउनु भएन। मेरो एउटा कुरा के भने दोषी ठहर नभई मिडियाको अगाडि ल्याउनु भएन ।
व्यापारिको माग पनि यही त थियो नि ?
व्यापारीको माग होइन मेरो भिजन हो । व्यापारीले के भन्छ त्यो छाडिदिनुस्। अनुसन्धान ढोल पिटेर हुँदैन । दोषी भयो भने मिडियाको अगाडि ल्याउने। मुद्दा चलाउने बेलामा मिडियालाई दिने । सानो मान्छे नै किन नहोस् डिमोरलाइज्ड भयो भने ऊ समाजमा हिँड्न सक्दैन। हामीले त त्यस्ता मान्छेलाई सुधार्ने हो । सबैतिर गडबड छन्। मेरै निर्देशन सहसचिवले मान्दैन ।
मैले त्यतिबेला भनेँ, शिक्षा र स्वास्थमा हामी किन जाने? शिक्षा मन्त्री के गरेर बस्छ, स्वास्थ्य मन्त्री के गरेर बस्छ ? पहिले हामीले हाम्रो घर ठिक पार्नुपर्छ । तेल ठिक छ कि छैन। तेलको नाप ठिक छ कि छैन । त्यो हेर्नुपर्छ । खाद्यान्न हेर्नुपर्छ । हाम्रो तिर जाँदै नजाने कहाँ माल पाइन्छ खोजी खोजी हिँड्ने यो अनुगमन होइन । जुन जुन विषय जुन जुन मन्त्रालयसँग जोडिन्छ त्यसैलाई कारबाही गर भनेर भन्दिने हो ।
धेरै हाइप्रोफाइलका सेक्स स्क्याण्डल पनि बाहिर आउन सक्छनः समाजशास्त्री
Posted: 2018-10-13 06:28:51
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिले सबैभन्दा बढी आलोचित भएको र रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुको पछाडि राजनीतिक भन्दा पनि सामाजिक कारण छन् भन्दा बहस अवश्य होला । तर, सामाजिक अपराधहरुको नियन्त्रण गर्न नसके पनि अपराधीलाई कारवाही गर्ने सन्दर्भमा समेत सरकार असफल भएको भन्दै नागरिक स्वस्फूर्त विरोधमा उत्रेका छन् ।प्रस्तुत छ, समाजशास्त्री ढकालसँग बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय कोणबाट गरेको प्रश्नोत्तर –
आर्थिक र बौद्धिक लगानी उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्: जीवा लामिछाने, संरक्षक तथा पुर्वअध्यक्ष गैरआवासीय नेपाली संघ
Posted: 2018-10-10 19:13:43
जीवा लामिछाने गैरआवासीय नेपाली संघ संघको स्थापनाकालदेखि नै लगातार रुपमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । नेपालको आर्थिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीहरुले सामूहिक लगानीबाटै टेवा पुराउन सक्ने विश्वास लामिछानेको रहेको छ । संघको संरक्षक तथा पुर्वअध्यक्ष समेत रहनु भएका लामिछानेसंग गैरआवासीय नेपाली संघको समाचार संयोजक चिरन शर्माले नेपालमा हुन लागेको विज्ञ सम्मेलनको सम्वन्धमा गरिएको कुराकानी ।...
ज्ञान र सिप भित्र्याउन सम्मेलन कोशेढुङा हुने
Posted: 2018-09-29 06:46:11
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आयोजनामा आगामी १२ र १३ अक्टोवरमा दुई दिने विज्ञ सम्मेलन र विधानसभाको आयोजना गर्दैछ । विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका नेपालीहरु र नेपालप्रति चासो राख्ने विदेशी विज्ञहरुसाग नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न विश्व–विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा व्यवसायिक संस्थालाई जोड्ने अभिप्रायले आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनका सन्दर्भमा सम्मेलन संयोजक द्वय डा. हेमराज शर्मा तथा कुमार पन्तसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ... ...
नागरिकको खान, लाउन, बस्न र छोराछोरी पढ्न नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन: प्रधानमन्त्री ओली
Posted: 2018-09-19 05:54:53
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई विभिन्न तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन भएको आजै सात महीना पुगेको छ । लामो समयको सङ्घर्षबाट जनताले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र विकासका जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय रहिआएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पत्रकारहरूले नेपालको संविधान जारी भएको चौथो वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगलिएको विशेष अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश
संघीयताले बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो फाइदाः अनिल शाह
Posted: 2018-09-12 07:08:22
काठमाडौं । अनिल केशरी शाह एक जना त्यस्ता ‘लाइक माइन्डेड’ बैंकर मानिन्छन, जसले कुनै न कुनै नयाँ विचार प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । अहिले उनी संघीयताले बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो फाइदा पुगेको निश्कर्षमा छन् । हाल नविल बैंकका सीईओ रहेका शाहसँग हामीले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था, स्प्रेड दर र ब्याजदर लगायतका विषयमा बैंकर शाहसँग गरेको कुराकानीः...